I-Smartfile: I-Whitelabel Isixazululo Sakho Sefayela Elikhulu | Martech Zone
I-Smartfile: I-Whitelabel Isixazululo Sakho Esikhulu Sefayela
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 19, i-2013 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 UJohn Hurley
Noma ngabe uqala ibhizinisi elisha, noma wethula umkhiqizo omusha, umbuzo wokuqala okufanele uwubuze ukuthi, "Ngubani imakethe / ikhasimende lami"? Kuzwakala kulula, akunjalo? Ngaphambi kokuba ngifike engxenyeni yokuthi thina sehluleke ngokuphelele ukuphendula lowo mbuzo ngendlela efanele, ake ngikunikeze indawo yami yebhizinisi yemisho emibili: I-SmartFile (yithi leso) inkampani yokwabelana ngamafayela eyenzelwe ibhizinisi. Sinikeza amabhizinisi indlela ephephile, enophawu lokuthumela kalula nokwamukela amafayela.
Lapho siqala eminyakeni engu-3 eyedlule, sasikholelwa ukuthi ochwepheshe be-IT bazokhalaza besebenzisa umkhiqizo wethu. Sizokwenza umsebenzi wabo ube lula kakhulu ngokubeka ukuphathwa kwabasebenzisi namafayela ezandleni zabasebenzisi babo. Ngemuva kokuchitha izinkulungwane zamadola, amahora amaningi ekuthengisaneni, kwa-Adwords, noma izingcingo ezibandayo, sabona ukuthi ochwepheshe be-IT babeyiqembu lokugcina labantu ababefuna ukukhuluma nathi… ingasaphathwa eyokusikhokhela imali. Lokho ebesikucela ukuthi bakwenze ukuthatha enye ingxenye yomsebenzi wabo, futhi okubi kakhulu, ukuthatha "amandla abo".
Ngaphandle kokukhohlisa kwethu, abantu basabhalisile ukusebenzisa umkhiqizo wethu. Njengoba benza, saqala ukubona ukuthi laba kwakungebona abantu be-IT, kepha kunalokho yizingcweti zokuthengisa ngaphakathi kwalezinhlangano; ochwepheshe bezokumaketha bahlala bedinga ukuthumela amafayela amakhulu kozakwethu noma kumuntu wangaphandle omkhulu kakhulu ukuthi i-imeyili angakwazi ukuwaphatha. Noma ngabe lawa makhasimende ayeyingxenye yebhizinisi lamadoda amabili noma inkampani ye-Fortune 500, babekwazi ukubaluleka kokubeka uphawu kuzo zonke izici zebhizinisi labo, kufaka phakathi neseva yabo ye-FTP. Ngemuva kwakho konke, babengabachwepheshe bokumaketha! Futhi bebengafuni ukuhamba kuyo yonke i-red tape (inkinga) nomnyango wabo wangaphakathi we-IT ukusetha nokuphatha iseva yabo ye-FTP. Babengaphansi kwesibhamu, njengabantu abaningi bezentengiso, futhi babedinga isixazululo esisheshayo ukuhlangabezana nezidingo zabo. Ngakho-ke benze lokho thina sonke esikwenzayo uma sinenkinga: thayipha amagama ambalwa angukhiye ku-Search bese uvumela i-Google ukuthi iyixazulule. Ngokubonga ngathi, savela sabatshela ukuthi singenza izimpilo zabo zibe lula kancane.
Ngakho-ke umbuzo engiwuthola kaningi ukuthi yini esenza sihluke kuneDropbox, Ibhokisi noma iGoogle Drayivu futhi kungani ochwepheshe bezentengiso besikhetha ngaphezu kwabo? Ngizoqala ngeDropbox neGoogle Drayivu. Le yimikhiqizo emikhulu, futhi okuhle kakhulu, imahhala! Abahlukanisi ababili abakhulu phakathi kwabo, nathi kodwa, kunjalo ukufaka uphawu lokufaka uphawu nokufinyelela kwabasebenzisi abaningi. Into yokugcina iDropbox neGoogle Drayivu abazokuvumela ngayo ukuthi ushintshe i-logo yabo bese uyifaka eyakho, ingasaphathwa eyokuvumela ukuthi usebenzise isizinda sakho (files.yourdomain.com). Uma ukhathalela isithombe sakho senkampani njengami, lokhu akusebenzi. Okwesibili, le mikhiqizo yenzelwe umsebenzisi oyedwa. Umsebenzisi ngamunye kufanele abe ne-akhawunti nabo, bese ungabelana ngefolda. Zama ukuchaza le nqubo ku- "layman"; into yokugcina umuntu wokumaketha afuna ukuyenza iba ukwesekwa kwezobuchwepheshe.
Ngebhokisi, uthola ukufinyelela kwabasebenzisi abaningi, ukubika, ngisho nokufaka uphawu lokumaka, okukuvumela ukuthi usebenzise ilogo yakho nohlelo lombala; noma kunjalo, abayinikezi inketho yokusebenzisa isizinda sakho.
Umkhawulo omkhulu kunabo bonke abahlinzeki ngosayizi wefayela. Ifayela elikhulu kakhulu ongalilayisha lingu-2GB. Lokho kungazwakala njengefayela elikhulu, kepha akwanele ukulayisha ividiyo noma isethulo esindayo sePowerPoint. Nge-SmartFile ungalayisha noma yiliphi ifayili losayizi nganoma isiphi isiphequluli. Ngokuthola ubuchwepheshe obuningi, sinikeza ukusekelwa okugcwele kwe-FTP.
Ngakho-ke ukubuyela kubani ikhasimende lethu futhi ngimakethwa kanjani kubo? Sithole ukuthi bekungebona ubulili obuthile, ubudala, ibhizinisi, noma umnyango, kunalokho uhlobo lomuntu. Laba bantu basebenza ezweni elimatasa futhi babanjwa phakathi kokulunga futhi okubaluleke kakhulu ukukuthola ngesikhathi. Ukuqhamuka esikhungweni sokumaketha bengingacabangi ngomuntu olingana naleyo ncazelo kangcono kunami. Ngubani owaziyo?
Tags: Ukudluliswa kwefayelaifayela elikhuluukudluliswa kwefayela okukhului-smartfile
UJohn uneminyaka engaphezu kwe-14 yesoftware ye-Intanethi kanye nesipiliyoni sobuholi. Ngaphambi kokuqala i-SmartFile, uJohn wayengumongameli futhi engumsunguli we-Webexcellence, enye yamafemu amakhulu kakhulu wokuthuthukisa iwebhu e-Indianapolis. UJohn wasebenza nezinkampani ezinjengeDelco Remy, i-Angie's List ne-NCAA ukuthuthukisa izinhlelo zokusebenza zewebhu ezicebile. Futhi ngenkathi esebenza e-Webexcellence, uJohn wadlala indima enkulu esigabeni sokuqalisa se-ExactTarget. Njengomongameli nomqambimunye we I-SmartFile, UJohn uhola ukuthengisa, ukumaketha, kanye nokuthuthukiswa kwebhizinisi.
Yabelana Njengesithombe: Gqamisa, Chofoza bese Wabelana ngombhalo wakho
Ngo-Apr 23, i-2013 ku-8: 28 AM
Kulungile futhi “ukunika amandla” abasebenzisi bakho, kepha lokho kunikwa amandla kufanele kufake phakathi ukuvikelwa okususelwa kwinqubomgomo ukugcina idatha ebucayi yebhizinisi ingasuswa ngengozi noma ngamabomu ngoba leyo datha ibigcinwe kumafu we-cowboy kuphela, ngaphandle kwe-IT futhi akekho obesekela labo amafayela phezulu, noma kuphi. AKWESABI abasebenzisi bokugcina abalawulwayo ngoba sinezinkinga ezithile zokulawula, kepha ngoba sibonile, ngokusebenzisa okubi, umhlaba wangempela uhlangabezana nenani le-mayhem lowo umsebenzisi "onezinhloso ezinhle" "Ulwazi olwanele ukuba yingozi" luzama ukusenzela umsebenzi.
Yenza izipele ngokuzenzakalela? Kuhle. Shintsha izipele ngaphandle kwanoma yikuphi ukwenganyelwa ngochwepheshe bangempela? Ngokunokwenzeka, ukuzibulala ngenxa yebhizinisi. Lowo mhlinzeki wefu uzokwenza konke okusemandleni akhe ukukusiza, ngaphakathi kwemingcele yenzuzo. Uma sekunenzuzo enkulu kubo ukuvumela nje idatha yakho ihambe "poof" kuzokwenza njalo.